UNandi wethembisa isifundo ngomdlalo
INKAKHA yomlingisi, uNandi Nyembe, uthi ujabule ukuba yingxenye yomdlalo iStill Breathing ozoqala ukubonakala maduzane kwithelevishiniIsithombe: SITHUNYELWE
NOKUBONGWA PHENYANE | February 13, 2020
INKAKHA yomlingisi uNandi Nyembe isiveze ukuthi iyathemba intsha yakuleli izofunda lukhulu ngobunzima abantu ababebhekene nabo kuleli uma ibuka umdlalo iStill Breathing.
Lo mdlalo uzoqala kwiM-Net ngoFebhuwari 27 ngo-8.00 ebusuku. Isolezwe beliyingxenye yabezindaba akade behambele eSun City, lapho lesi siteshi besiyokhombisa khona ngezinhlelo zalo nyaka.
Kuzona bethule lo mdlalo osungulwe yinkampani iBBZ Films ephethwe abashadikazi uJamie noTiffany Barbuzano.
UNandi kuwona ulingisa indawo ka-Innocent ongunina kaT-Boss okungumlingisi olingiswa uSiv Ngesi.
Ekhuluma neSolezwe emuva kokukhonjiswa kwabezindaba isiqephu sokuqala, uthe kuyena kusho lukhulu ukulingisa indawo ezoba yisifundo kwabanye.
“Kulo mdlalo ngisebenza emakhishini, indodana yami ngafika nayo incane, bayikhulisa kulo mndeni futhi manje ingudokotela. Ifuna ukushintsha impilo yami kodwa mina kangifuni, ngifuna ukuhlala kulo muzi njengoba ngizizwa ngisekhaya futhi obasi bami ngingafuni ukubaphoxa. Eziqeshini ezizayo kuzocaca ukuthi yini eholela ekutheni angafuni ukuhamba kulo muzi ukuze ayophila kahle emzini wakhe,” kuchaza uNandi.
Uthe selokhu angena emkhakheni wokulingisa uyaqala ukulingisa indawo yomsebenzi wasendlini, yize empilweni yakhe yangempela wake waba wumsebenzi wasendlini.
“Yize sengikhulile kodwa imidlalo enginikwa yona ngiyenza ngenhliziyo emhlophe. Okunye kulo mdlalo, umsebenzi ubuthe xaxa njengoba imibhalo obekumele ngiyifunde ibifika ngolimi lwesiNgisi ekubeni mina kumele ngikhulume isiZulu,” kuchaza uNandi.
UTiffany uthe lo mdlalo bawubhala nomyeni wakhe wayesanda kushonelwa udadewabo owadlula emhlabeni ngenxa yesifo somdlavuza webele.
Uthe uyathemba baningi abazothola ukududuzeka kuwona.
“Njengoba lo mdlalo uthi Still Breathing, uchaza ukuthi noma sekwenzekeni empilweni yakho, ubuhlungu odlula kubona kodwa ekugcineni akusho ukuthi uma kukhona ofayo, nomunye kumele afe ngoba elandela lo ofile, siyasala siqhubeke nempilo yize kubuhlungu kakhulu. Ngiyathemba abantu bakuleli bazowuthokozela,” kuchaza uNandi.
Abanye abalingisi kulo mdlalo kukhona kubo uLorcia Cooper-Khumalo olingisa indawo kaLucille, Fulu Mugovhani onguNoli noJane de Wet olingisa indawo kaTegan.